ခြာလိုဘာရဲ့ ဝမျးသာမကျြရညျနဲ့ ခြဲလျဆီး 3-0 ပဲလစျေ့ပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာ7ခကျြ – Sports A2Z
ခြာလိုဘာရဲ့ ဝမျးသာမကျြရညျနဲ့ ခြဲလျဆီး 3-0 ပဲလစျေ့ပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာ7ခကျြ
သူ့အဆငျ့အတနျးကို သကျသပွေနိုငျခဲ့တဲ့ အလှနျဆို
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက နညျးပွဟောငျး ဖရနျ့ လမျးပတျလကျထကျမှာ ရောငျးထုတျခံရတော့မယျတကဲကဲဖွဈနတေဲ့ နောကျခံလူ မားကို့ဈ အလှနျဆိုကတော့ ရာသီကွိုမှာ တူဟယျလျရဲ့ အမာခံစာရငျးထဲကို တဖွညျးဖွညျးဝငျရောကျလာခဲ့သလို ဒီနမှေ့ာလညျး ပှဲထှကျခှငျ့ရပွီး သူ့ရဲ့ သပျရပျတိကတြဲ့ ဖရီးကဈက ပဲလစျေ့ဂိုးသမား ဂှိုငျတာကို ငုတျတုတျမစေ့ခေဲ့တာပါ။ နညျးပွရဲ့ ယုံကွညျမှုကို ပွနျပေးဆပျခဲ့တဲ့ စပိနျသားအနနေဲ့ ဒီအတိုငျး ဆကျသှားရငျ ဦးစားပေးနောကျခံလူ ဘနျ ခြေးလျဝဲလျကိုပါ ဖွုတျခနြိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာလညျးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
တိုကျစဈအတှကျ နရောဦးလိုကျတဲ့ ပူလီရှဈချြ
အမရေိကနျသားကတော့ ဒီနမှေ့ာ စားရကံကွုံလို့ မုတျဆိတျပြားစှဲခဲ့ပွီး ဂိုးမသှငျးနိုငျလို့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ တီမို ဗာနာဆီကနေ မွဈဖြားခံခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို ကောကျစားပွီး ဒီရာသီကို အဖှငျ့လှနိုငျခဲ့ပါတယျ။ လူကာကူး၊ ဗာနာ၊ ဟာဗတျဇျ၊ မဆေနျမောငျ့၊ ဇီးယကျရျှတို့နဲ့ လုရမယျ့ တိုကျစဈပိုငျးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျဂိုးတဈဂိုးဆိုတာက အရေးပါပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ရာသီက အသငျးရဲ့ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးသူ ဂြျောဂငျြညိုရဲ့ ခုနဈပုံတဈပုံဆိုတာက နရောတဈနရောအတှကျ အမှတျပေး စဉျးစားဖို့အတှကျ လုပျပွနိုငျခဲ့တာလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။
လုပျတတျကိုငျတတျဖို့ အမြားကွီးလိုသေးတဲ့ ဗီယာရာ
အာဆငျနယျအသငျးကပ်ပတိနျဟောငျးကို ဝုနျးခနဲ ဒိုငျးခနဲ အငျနဲ့အားနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပှဲထှကျလာမယျလို့ ထငျတဲ့သူတှကေို နောကျလနျသှားစခေဲ့တဲ့ပှဲတဈပှဲ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ရှိုငျးဟော့ဆနျလကျထကျက ဝါရငျ့တှကေို ခေါကျပဈခဲ့တဲ့ ဗီယာရာရဲ့ အသငျးကတော့ လူရှေးခယျြမှုကလညျး ကမောကျကမဖွဈခဲ့သလို ခံစဈပိုငျးမှာလညျး စညျးလုံးမှု နညျးခဲ့ပွီး နောကျဆုံးမှာ ရောကျလာတာ မကွာသေးတဲ့ ယိုအာခငျမျ အနျဒါဆနျကိုပါ ထညျ့ခဲ့ရပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ အသငျးရဲ့ တညျငွိမျမှုကို ထညျ့တှကျဖို့လိုပွီး လူငယျတှနေဲ့ လုပျခငျြတိုငျး လုပျမရဘူးဆိုတာ ခြဲလျဆီးနဲ့ပှဲမှာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး အဖွပေျေါသှားခဲ့တာပါ။
အခှငျ့အရေးကို အမိအရယူပွီး မကျြရညျကခြဲ့သူ ခြာလိုဘာ
ထရီဗို ခြာလိုဘာကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဥရောပါဆူပါဖလားမှာ ပှဲထှကျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုရခဲ့သလို ဒီနမှေ့ာပဲ ပရီးမီးယားလိဂျဆီ ပုံစံကောငျးတှေ သယျဆောငျလာနိုငျခဲ့ပွီး လှပတဲ့ အဝေးကနျခကျြနဲ့ တဈဂိုးသှငျးယူအပွီး စိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ မကျြရညျကလြို့ စီနီယာတှေ ဝိုငျးခြော့ခဲ့ရတာပါ။ ဒီပှဲမှာ သူ့အနနေဲ့ ဂိုးပေါကျတညျ့မှု ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ဘောလုံးသယျယူနိုငျမှု ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ပေးပို့မှု ၈၁ ကွိမျ (တိကမြှု ၉၃ ရာခိုငျနှုနျး)နဲ့ ခံစဈစှမျးဆောငျရညျပါ မွငျ့မားခဲ့ပွီး သူ့ကို ကြျောဖွတျခံရတာမြိုးလညျး မရှိခဲ့ဘဲ အဖကျဖကျက တာဝနျကခြေဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီးတို့ရဲ့ ကွယျပှငျ့သဈလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
လူကာကူးတပညျ့ဖွဈဖို့ သခြောသှားတဲ့ ဗာနာ
ခြဲလျဆီးတိုကျစဈမှာ သကျရောကျမှုနညျးပါးလှနျးခဲ့တဲ့ တီမို ဗာနာကတော့ အဆုံးသတျပိုငျးဆိုတာ ဘယျလို၊ နရောယူမှုဆိုတာ ဘယျလိုဆိုတာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘှနျဒကျဈလီဂါကလို မပွောငျးမလဲ ကစားနလေို့ မရဘူးဆိုတာ သငျယူရတော့မှာဖွဈပွီး အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ နရောကို လူကာကူးဆီ ဆုံးရှုံးရဖို့ ဖွဈလာမှာပါပဲ။ တဈဖကျအသငျးဂိုးရှမှေ့ာ ဒီလောကျ ဖိကစားနတောတောငျ ဝိုငျးဝနျးဖနျတီးနကွေတဲ့ ဖွတျတငျဘောတှကေို အသုံးမခတြတျတဲ့ ဂြာမနျသားအနနေဲ့ ဝဖေနျသူတှရေဲ့ စကားတှထေဲကနေ အနားပေးခံရတော့မှာလညျးဖွဈပွီး ရှလြေှ့ောကျ ဟငျဟာတောကျကြှတျလုပျဖို့ မလိုအပျတော့ဘဲ အရနျခုံကိုသာ ပူအောငျထိုငျရဖို့ နီးစပျနပေါတယျ။
10 – Asaplayer, Patrick Vieira never lostaPremier League match against Chelsea, winning six and drawing four of his 10 appearances against the Blues. Charm. #CHECRY pic.twitter.com/B8dqM9Nysz
အာဆငျနယျစံခြိနျကိုမှ လာဖကျြတဲ့ ခေါငျးဆောငျဟောငျးကွီး
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ကပ်ပတိနျအဖွဈ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ တဈပှဲမှ မရှုံးဖူးသေးတဲ့ ပကျထရဈ ဗီယာရာဟာ နညျးပွဘဝမှာတော့ ပထမဆုံး တှဆေုံ့မှုမှာပဲ ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့ရပါတယျ။ ဟိုကျဘာရီရဲ့ ထငျရှားတဲ့ ပွယုဂျဖွဈခဲ့သူ ပွငျသဈသားကွီးဟာ ခြဲလျဆီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ ၁၀ ကွိမျ တှဆေုံ့ဖူးရာမှာ ၆ ပှဲနိုငျ ၄ ပှဲသရကေခြဲ့ဖူးသူဖွဈပွီး သူ့ခတျေသူ့အခါမှာ ဆရာကလြှနျးခဲ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနမှေ့ာတော့ သမိုငျးကွောငျးတှကေ အစဉျအမွဲ ကောငျးမနဘေူးဆိုတာ ပဲလစျေ့နဲ့အတူ သငျခနျးစာရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
စံခြိနျရသှားတဲ့ ဂိုးသှငျးရှငျ ကစားသမားသုံးဦး
ဒီနမှေ့ာ အဖှငျ့ဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ မားကို့ဈ အလှနျဆိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ခြဲလျဆီးအသငျးအတှကျ ဖရီးကဈဂိုး ၅၀ မွောကျကို သှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့သူ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယဂိုးရှငျ ပူလီရှဈချြကတော့ သူ့ရဲ့ ခရစ်စတယျလျပဲလစျေ့နဲ့ တှဆေုံ့တဲ့ နောကျဆုံး ၅ ပှဲမှာ ၅ ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒီအရအေတှကျက သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုးအားလုံးရဲ့ ၃၆ ရာခိုငျနှုနျးလညျးဖွဈခဲ့တာပါ။ တတိယဂိုးရှငျ ခြာလိုဘာကတော့ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ပထမဆုံးပှဲထှကျခှငျ့မှာ ဂိုးသှငျးယူနိုငျသူတှထေဲမှာ ဒုတိယ အသကျအငယျဆုံး ကစားသမားအဖွဈ အသကျ ၂၂ နှဈနဲ့ ရကျ ၄၀ အကွာမှာ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီး သူတို့တှကေ လောကျလောကျလားလား ပွောစရာဖွဈခဲ့ကွတာပါ။
သူ့အဆင့်အတန်းကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အလွန်ဆို
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက နည်းပြဟောင်း ဖရန့် လမ်းပတ်လက်ထက်မှာ ရောင်းထုတ်ခံရတော့မယ်တကဲကဲဖြစ်နေတဲ့ နောက်ခံလူ မားကို့စ် အလွန်ဆိုကတော့ ရာသီကြိုမှာ တူဟယ်လ်ရဲ့ အမာခံစာရင်းထဲကို တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာခဲ့သလို ဒီနေ့မှာလည်း ပွဲထွက်ခွင့်ရပြီး သူ့ရဲ့ သပ်ရပ်တိကျတဲ့ ဖရီးကစ်က ပဲလေ့စ်ဂိုးသမား ဂွိုင်တာကို ငုတ်တုတ်မေ့စေခဲ့တာပါ။ နည်းပြရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ စပိန်သားအနေနဲ့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားရင် ဦးစားပေးနောက်ခံလူ ဘန် ချေးလ်ဝဲလ်ကိုပါ ဖြုတ်ချနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
တိုက်စစ်အတွက် နေရာဦးလိုက်တဲ့ ပူလီရှစ်ခ်ျ
အမေရိကန်သားကတော့ ဒီနေ့မှာ စားရကံကြုံလို့ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲခဲ့ပြီး ဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ တီမို ဗာနာဆီကနေ မြစ်ဖျားခံခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို ကောက်စားပြီး ဒီရာသီကို အဖွင့်လှနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူကာကူး၊ ဗာနာ၊ ဟာဗတ်ဇ်၊ မေဆန်မောင့်၊ ဇီးယက်ရ်ှတို့နဲ့ လုရမယ့် တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတာက အရေးပါပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာသီက အသင်းရဲ့ ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူ ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ ခုနစ်ပုံတစ်ပုံဆိုတာက နေရာတစ်နေရာအတွက် အမှတ်ပေး စဉ်းစားဖို့အတွက် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ဖို့ အများကြီးလိုသေးတဲ့ ဗီယာရာ
အာဆင်နယ်အသင်းကပ္ပတိန်ဟောင်းကို ဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ အင်နဲ့အားနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲထွက်လာမယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေကို နောက်လန်သွားစေခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွိုင်းဟော့ဆန်လက်ထက်က ဝါရင့်တွေကို ခေါက်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဗီယာရာရဲ့ အသင်းကတော့ လူရွေးချယ်မှုကလည်း ကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့သလို ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်း စည်းလုံးမှု နည်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ရောက်လာတာ မကြာသေးတဲ့ ယိုအာခင်မ် အန်ဒါဆန်ကိုပါ ထည့်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အသင်းရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ထည့်တွက်ဖို့လိုပြီး လူငယ်တွေနဲ့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်မရဘူးဆိုတာ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေပေါ်သွားခဲ့တာပါ။
အခွင့်အရေးကို အမိအရယူပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့သူ ချာလိုဘာ
ထရီဗို ချာလိုဘာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဥရောပါဆူပါဖလားမှာ ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရခဲ့သလို ဒီနေ့မှာပဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ဆီ ပုံစံကောင်းတွေ သယ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီး လှပတဲ့ အဝေးကန်ချက်နဲ့ တစ်ဂိုးသွင်းယူအပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ မျက်ရည်ကျလို့ စီနီယာတွေ ဝိုင်းချော့ခဲ့ရတာပါ။ ဒီပွဲမှာ သူ့အနေနဲ့ ဂိုးပေါက်တည့်မှု ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဘောလုံးသယ်ယူနိုင်မှု ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပေးပို့မှု ၈၁ ကြိမ် (တိကျမှု ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း)နဲ့ ခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်ပါ မြင့်မားခဲ့ပြီး သူ့ကို ကျော်ဖြတ်ခံရတာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘဲ အဖက်ဖက်က တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့်သစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လူကာကူးတပည့်ဖြစ်ဖို့ သေချာသွားတဲ့ ဗာနာ
ချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်မှာ သက်ရောက်မှုနည်းပါးလွန်းခဲ့တဲ့ တီမို ဗာနာကတော့ အဆုံးသတ်ပိုင်းဆိုတာ ဘယ်လို၊ နေရာယူမှုဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကလို မပြောင်းမလဲ ကစားနေလို့ မရဘူးဆိုတာ သင်ယူရတော့မှာဖြစ်ပြီး အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ နေရာကို လူကာကူးဆီ ဆုံးရှုံးရဖို့ ဖြစ်လာမှာပါပဲ။ တစ်ဖက်အသင်းဂိုးရှေ့မှာ ဒီလောက် ဖိကစားနေတာတောင် ဝိုင်းဝန်းဖန်တီးနေကြတဲ့ ဖြတ်တင်ဘောတွေကို အသုံးမချတတ်တဲ့ ဂျာမန်သားအနေနဲ့ ဝေဖန်သူတွေရဲ့ စကားတွေထဲကနေ အနားပေးခံရတော့မှာလည်းဖြစ်ပြီး ရှေ့လျှောက် ဟင်ဟာတောက်ကျွတ်လုပ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘဲ အရန်ခုံကိုသာ ပူအောင်ထိုင်ရဖို့ နီးစပ်နေပါတယ်။
အာဆင်နယ်စံချိန်ကိုမှ လာဖျက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်အဖြစ် ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ တစ်ပွဲမှ မရှုံးဖူးသေးတဲ့ ပက်ထရစ် ဗီယာရာဟာ နည်းပြဘဝမှာတော့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှုမှာပဲ ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဟိုက်ဘာရီရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်ခဲ့သူ ပြင်သစ်သားကြီးဟာ ချဲလ်ဆီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ ၁၀ ကြိမ် တွေ့ဆုံဖူးရာမှာ ၆ ပွဲနိုင် ၄ ပွဲသရေကျခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ ဆရာကျလွန်းခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ သမိုင်းကြောင်းတွေက အစဉ်အမြဲ ကောင်းမနေဘူးဆိုတာ ပဲလေ့စ်နဲ့အတူ သင်ခန်းစာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
စံချိန်ရသွားတဲ့ ဂိုးသွင်းရှင် ကစားသမားသုံးဦး
ဒီနေ့မှာ အဖွင့်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ မားကို့စ် အလွန်ဆိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် ဖရီးကစ်ဂိုး ၅၀ မြောက်ကို သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယဂိုးရှင် ပူလီရှစ်ခ်ျကတော့ သူ့ရဲ့ ခရစ္စတယ်လ်ပဲလေ့စ်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၅ ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီအရေအတွက်က သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုးအားလုံးရဲ့ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တတိယဂိုးရှင် ချာလိုဘာကတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ပထမဆုံးပွဲထွက်ခွင့်မှာ ဂိုးသွင်းယူနိုင်သူတွေထဲမှာ ဒုတိယ အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ် အသက် ၂၂ နှစ်နဲ့ ရက် ၄၀ အကြာမှာ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး သူတို့တွေက လောက်လောက်လားလား ပြောစရာဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။